नेपाली मितिः वि.सं. २०७५ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३९ । भाद्र महिनाको ९ गते शनिवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१८ अगस्त महिनाको २५ तारिख ।
तिथीः दक्षिणायन, वर्षा ऋतु श्रावण शुक्लपक्षको चतुर्दशी, १४ः२७ बजेपछि पूर्णिमा ।
योगः शोभन, २१ः३६ बजेपछि अतिगण्ड ।
नक्षत्रः श्रवण, १०ः२१ बजेपछि धनिष्ठा ।
करणः वणिज, १४ः२७ बजेपछि भद्रा ।
चन्द्रमाः मकर राशिमा, २३ः३७ बजेपछि कुम्भमा ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०५ः३९ बजे ।
राहुकालः ०८ः५२ बजेपछि १०ः२९ बजेसम्म ।
यात्राः भद्रा, राहुकाल र अशुभबेला छाडी, शुभमुहूर्त पारी अग्नि एवं नैर्ऋत्य दिशाको लागि उपयुक्त ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन गोचर अवस्था केही संघर्षको बाबजुत पनि सफलता एवं लाभ दिने खालको रहेको छ । धार्मिक–आध्यात्मिक चिन्तनको वातावरण बन्ने र धार्मिक तथा सात्त्विक विचारमा विकास हुने तथा आस्थाको धरोहरमा प्रगाढता आउने छ । धर्मअध्यात्मतर्फ अग्रसरता भइने, मुख्य ठानिएको कामकार्यमा अदृष्यअवरोध एवं अपजश आइपरे पनि लगनशीलतापूर्वक स्वकर्तव्यमा रत्रहनाले सफलता मिल्ने छ । औपचारिक कार्यक्रम आदिको निमन्त्रणा मिल्नसक्नेछ । इष्टकार्य पूर्णतातर्फ अघि बढ्ने र आ“टसाहसमा पनि बृद्धि हुनेछ । स्वजनबाट सहयोग मिल्ने हुनालो चुनौतिको प्रतिकार गर्न सहज हुनेछ । वीर हनुमानको सेवाश्रद्धा गर्नाले अबरोध हटाउन सहज हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन प्रतिकूल गोचर परेको छ । ग्रहले मानसिक अशान्ति तथा स्वास्थ्य समस्या बढाउने खालको स्थिति सृजना गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । दीर्घ रोगीलाई बढीकष्ट हुनसक्ने छ । सर्वसाधारणलाई हतार गर्दा कार्यबाधा र खतिक्षति हुनसक्ने सम्भावना रहेकोले नहतारिएकै राम्रो हुनेछ । प्रतिकूल ग्रहप्रभावले सामान्यतया किंकर्तव्यविमूढताको अनुभूति हुनसक्ने छ संयमित रहनुपर्ला । कसैकसैलाई राम्रो गर्न खोज्दा पनि परिणाम विपरित आउनसक्ने भएकोले स्यावासीको अपेक्षा नगर्दा सुखी भइनेछ । आज यहाँले आठ अङ्क, रातो रङ्गको प्रयोग र भगवान महावीर हनुमानको श्रद्धाभक्ति गर्नु शुभप्रद हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन दिनलाई सुधारोन्मुख त मान्न सकिन्छ । तरपनि कुनै कुनै क्षेत्रमा आक्रोश एवं रणनीतिक भूमिकाको चेष्टा हुनसक्ने छ । अध्ययन आदि प्राज्ञिककर्ममा सफलता एवं नीतिगत कार्यमा सम्मान पनि नमिल्ला भन्न सकिन्न । कुट्नैतिक कार्य तथा प्रस्तुतिमा सफलता र प्रशंसा पाइने छ । अदृष्य समस्या आइपर्ने र समयको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने डर पनि देखिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल र अर्तिउपदेश जन्य वातावरणको संयोग जुट्न सक्नेछ । कसैकसैलाई सन्तानको बाटोबाट चिन्तित हुनपर्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । आज यो राशि हुनेहरुले अढैया शनिको दुष्प्रभाव न्यूनिकरणको लागि शनिदेवलाई खुशी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुको साथमा भैरवदेवको स्तुति गर्नु विशेष हितकर हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन गोचर ग्रह सुध्रिएको छ । ईज्जत तथा मानप्रतिष्ठामा विकास हुनेछ । मनोनुकूल वातावरण सृजना हुनाले मनोरञ्जन एवम् खुशीयाली बढ्ने छ । मनोवाञ्छित स्वादिष्ट भोजनद्वारा मेजमानी मिल्नसक्ने छ । इष्टमित्रको आगमन हुने र सौगात तथा उपाहार मिल्नसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । नयाँकाममा लगानी वा शेयर आदि कारोबारको अवसर मिल्नसक्ने छ । पेशागत लाभ एवम् सफलता प्राप्त हुनेछ । आज यहाँलाई एक अङ्क, रातो रङ्गको प्रयोग र हनुमानदेवको दर्शन भक्तिले अरु थप हित गर्ने छ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आयप्रद ग्रहगोचर छ तथापि केही ग्रहबाधा पनि देखिएको छ । जसको कारणले मुख्य मानिएको तथा अपेक्षा र आश्वासन मिलेको कामकार्यमा अबरोध सृजना हुने अथवा भेट्नुपर्ने मान्छेसँग भेट् नहुनसक्ने सम्भावना छ । अपेक्षा गरिएको मान्छे वा कामको बाटो हेर्नुमात्रै हुने सम्भावना छ । बाँकी दैनिकीको पक्ष ठिकै देखिएको छ । आफन्तजनको शुभसमाचार भने सुन्न पाइने दिन रहेको छ । आज यहाँको लागि दुई अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग गर्नु फापसिद्ध हुनेछ । मुख्य कार्यमा आउने अदृष्य बाधाअबरोध निवारणको लागि माँ बगलामुखीको दर्शन भक्ति एवं गुरुजनको आर्शिवाद ग्रहण गर्नु शुभदायक हुनेछ ।